Madaxweynihii dalka Burundi Pierre Nkurunziza oo geeriyooday | Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynihii dalka Burundi Pierre Nkurunziza oo geeriyooday
Madaxweynihii dalka Burundi Pierre Nkurunziza oo geeriyooday
Madaxweynihii dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa geeriyooday kadib markii uu wadnuhu istaagay. Qoraal ah oo oo ay dowladda Burundi soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa lagu xaqiijiyay geeridiisa.
“Dowladda Jamhuuriyadda Burundi waxay si murugo leh u shaacineysaa geerida lama filaanka ah ee ku timid Pierre Nkurunziza, madaxweynaha Jamhuuriyadda Burundi, oo ku dhintay isbitaalka Karusi Fiftieth Anniversary, kaddib markii uu wadnbaha istaagay 8-dii bishan June, 2020-ka”, ayaa lagu yiri qoraalka.
Pierre Nkurunziza oo 55 sano jir ahaa ayaa la dhigey isbitaal maalintii Sabtidii hase yeeshee xaaladdiisa ayaa soo hagaagtay ka dibna Isniintii waxaa laga saaray Isbitaalka. Wuxuu qababay wadne xanuun. dadaalkii la doonayay in lagu daweeyayana wuxuu noqday mid guul dareystay.
Mr Nkurunziza wuxuu Burundi hoggaaminayay tan iyo 2005. Wuxuuna hadda isu diyaarinayay in 20-ka bisha Aguast uu xilka dalka ku wareejiyo madaxweynaha la doortay Evariste NDayishimiye. Dowladda Burundi waxay ku dhawaaqday toddobo maalmood oo baroordiiq ah.
Ciidamada Nabad ilaalinta AMISOM eek u sugan dalka Soomaaliya ayaa waxaa qeyb ka ah ciidamo ka socda dalka Burundi iyagoo ku sugan gobolka Sh/dhexe iyo deegaano kale.